घर भत्काउँदिन, ट्राफिक व्यबस्थापन गर्छु spacekhabar
घर भत्काउँदिन, ट्राफिक व्यबस्थापन गर्छु सिर्जना सिंह
पार्टीको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय भएर पनि कुनै पदमा रहनु भएन। यस पटक कांग्रेसले मेयरको प्रतिस्पर्धामा अघि सारेको छ। कस्तो लागिरहेको छ?
विद्यार्थी कालदेखि नै म निरन्तर पार्टीको राजनीतिमा संलग्न छु। प्रकाशमानसँग बिबाह गर्नुअघि ९ कक्षामा पढ्दा २०३३ सालमै मैले कांग्रेसको सदस्यता लिइसकेको थिएँ। २०३६ सालमा जनमतसंग्रहको बेला गोरखामा बहुदल प्रचार प्रसार समिति हाँकेको हुँ। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय थिएँ। हो मैले अहिलेसम्म पनि कुनै पद लिएको थिइन। पद नलिएको भए पनि राजनीति सँगै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छु।
तर कतिपयले मलाई प्रकाशमानको श्रीमति भएर टिकट पाएको भनी टिप्पणी गरेको पनि सुनेकी छु। प्रकाशमानको श्रीमति भएकै कारणमात्र मैले टिकट पाएको चाँही होइन। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति हुनु के मेरो दोष हो र? राजनीतिमा सक्रिय भएर अघि बढ्ने मेरो सोचमा समर्थन गरेर पार्टीले मलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा अघि बढाएको छ। अहिले मतदाताको घरदैलो अभियानमा छु।
घरदैलो पुग्दा मतदाताको कस्तो प्रतिकृया पाउनु भएको छ?
म जहाँ जहाँ पुगेको छु सबैले मलाई बिजयको शुभकामना दिनु भएको छ। काठमाडौं जस्तो देशको राजधानी भएको महानगरको मेयरमा कांग्रेसले महिलालाई अघि सारेकोमा उहाँहरु धेरै खुसी हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि महिला दिदीबहिनीहरुमा धेरै उत्साह देखिएको छ। अन्य दलहरुले पार्टीमा समाबेशीको कुरा गरे पनि व्यबहारमा महिलालाई अगाडि सारिएको छैन। ती दलका नेताहरुले भाषणमा समावेशीको कुरा गरे पनि व्यबहारमा देखिएन। कांग्रेसले व्यबहारिक रुपमा समाबेशीको सिद्धान्तको कार्यान्वयन गरेको छ।
तपाईंको चुनावी अजेण्डा के त?
म ३६ वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आएको छु। यहाँको समस्याप्रति म जानकार छु। यहाँ खासगरी श्रम गरेर खाने महिला, पुरुष दुबैको अबस्था दयनीय छ। महिलाहरुका लागि ‘गृहणी प्याकेज’ कार्यक्रम ल्याउने छु। काठमाडौमा बेरोजगारी समस्या छ। बेरोजगारी समस्या हल गर्न युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन जरुरी छ। खानेपानीको समस्या छ। फोहोरको समस्या छ। सडकमा जताजतै खाल्डाखुल्डी छ। यी र यस्ता समस्याको दीर्घकालीन रुपमा हल गर्नेतर्फ मैले योजना बनाएको छु। यति गरिसकेपछि यो महानगरलाई कांग्रेसको मात्र हैन, सबैको हो भन्ने बनाउँछु।
तपाईंले नेतृत्व गरेको महानगर कस्तो होला भनेर मतदाताले कल्पना गर्ने?
काठमाडौंको पहिचान फोहोर शहरका रुपमा रहेको छ। यसतर्फ मेरो ध्यान जानेछ। काठमाडौंलाई सफा र व्यबस्थित शहर बनाउने मेरो योजना छ। त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने सोचाई छ।
अर्को कुरा, काठमाडौं महानगर असुरक्षित छ। मेरो पहिलो अजेण्डा सुरक्षित महानगर बनाउने हो। जहाँ एकजना महिला साँझ, बिहान हिडडुल गर्न कुनै समस्या नहोस्। काठमाडौं भनेको पहिलादेखि नै व्यापारिक केन्द्र हो। त्यसैले यसलाई रातदिन खोल्ने बनाउनुपर्छ। योजनाबद्ध ढंगबाट व्यबस्थित शहर बनाउने मेरो योजना छ।
काठमाडौंको ट्राफिक व्यबस्थापनबारे केही सोच्नु भएको छ?
हो काठमाडौंमा सवारी साधन धेरै भित्रिएका छन् तर सडक साँघुरा छन्। एउटा बास्तबिकता के हो भने शहर सानो छ। राजधानीमा धेरै सुबिधा भएका कारणा बाहिरबाट आएर बस्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। घर भत्काएर बाटो बढाउँदामात्र समस्याको समाधान हुदैन। त्यसकारण मेरो प्राथमिकता घर भत्काउने भन्दा पनि ट्राफिक व्यबस्थापन गर्नु हुनेछ।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौ महानगरको
नेतृत्व महिलाले हाँकेको हेर्न पाइने भयो
भनेर उहाँहरु खुसी हुनु भएको छ।
मेयरमा जित्नु हुन्छ त ?
मतदाताका घरदैलोमा पुग्दा जुन किसिमको स्नेह पाएको छु त्यसबाट म निकै उत्साहित भएकी छु। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौ महानगरको नेतृत्व महिलाले हाँकेको हेर्न पाइने भयो भनेर उहाँहरु खुसी हुनु भएको छ। साथै, महिलाले नेतृत्वले महानगरको रुप फेरिने भयो भनेर उहाँहरु मत दिनका लागि आतुर हुनुहुन्छ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धा चाँही को संग होला?
मेरो उम्मेदवारीबाट महानगरवासी धेरै खुसी हुनु भएको छ। त्यसबाट उत्साहित छु। मतदाताहरुको भनाईबाट मलाई के बिश्वास छ भने मेरा प्रतिस्पर्धीहरु म भन्दा धेरै पछाडि हुनुहुन्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २६, २०७९, ०९:०५:००